Wakiilka Philippe Coutinho Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Xiddiga Ee Barcelona Xilli Kooxdu Ku Dhawdahay Antoine Griezmann – Wararka Ciyaaraha Maanta
Wakiilka Philippe Coutinho Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Xiddiga Ee Barcelona Xilli Kooxdu Ku Dhawdahay Antoine Griezmann
May 16, 2019 kooxda La Liga, Wararka Maanta 0
Wakiilka xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho ayaa ka hadlay mustaqbalka xiddiga uu wakiilka u yahay xilli ay Barcelona ku dhawdahay saxiixa xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann.
Wakiilka Philippe Coutinho ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in uu imaatinka Antoine Griezmann ee Barcelona soo afjari doono mutaqbalka Philippe Coutinho ee kooxda Barcelona.
Xiddiga weerarka uga ciyaara Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa xaqiijiyay in uu isaga tagi doono kooxda Atletico Madrid marka la gaadho 1 bish July markaas oo lacagta lagu bur-burin karo heshiiskiisu noqon doonto 120 milyan oo euro.
Xiddiga reer France aaya iska diiday in uu Barcelona ku biiro xagaagii hore waxana haatan la filayaa in uu ku biiro kooxda ku ciyaarta Camp Nou.
Barcelona ayaa Wakhti horeba la soo saxiixatay da,yarka Ajax ee Frenkie de Jong halka ayy sidoo kale doonayso saxiixa xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Matthijs de Ligt laakiin Barcelona ayaa u baahan in ay xiddigo iibiso sidoo kale xagaaga.
Xiddiga amaahda kula jooga Everton ee Andre Gomes ayaa la iibin doonaa halka imaatinka Matthijs de Ligt uu kooxda ka diri doono daafaca reer France ee Samuel Umtiti.
Imaatinka suurtagalka ah ee Griezmann ayaa sidoo kale dabla ku sii shiday mustaqbalka Coutinho iyada oo ay wararku sheegayaanin ay Barcelona suuqa dhigi doonto xiddiga.
Si kasta ha ahaatee wakiilka xiddiga ee Giuliano Bertolucci ayaa sheegay in ayna waxba ka jirin in ay Barcelona iibin doonto xiddigii hore ee Liverpool si ay boos ugu banayso xiddiga koobka adduunka ku guulaystay.
“Run ma ahan in uu Griezmann badal u noqon doono Philippe”ayuu u sheegay wargayska AS “Ma garanayo sababta ay waxyaabahaas u qorayaan”.
“Waxba kama ogi arimahaad mana doonayo in aan ka hadlo waa wax been ah”.
Liverpool Oo Dhibaato Ku Noqonaysa In Ay Man United Hesho Saxiixa Ryan Sessegnon & Sababta Oo La Ogaaday